Shiinaha TS-DQ-100 Double Arm Electrical Medical Endoscopic Pendant oo ka socda soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Warshadaha | Wanyu
1. Qolka Hawlgalka
2. Qolka Gurmadka
4. Qolka Soo-kabashada
1. Nidaamka Wadista Korontada
Nidaamka korontada ku shaqeeya iyo cududda qeexan, waxay ku habboon tahay walxaha caafimaadka, waqti badbaadin iyo dadaal jireed.
Qalabka Caafimaadka korantada
2. Qol Wareeg Labaad ah
Labada gacmood oo laba laabma, dhererka gacanta waa la habeyn karaa waana la beddeli karaa 350 darajo, iyadoo la siinayo meel badan oo dhaqdhaqaaq ah.
3. Naqshadaynta Kala Saarida Gaaska iyo Korontada
Marka loo eego heerarka adag ee caalamiga ah, aagga gaaska iyo aagga korantada waxaa loo qaabeeyey si gooni gooni ah si loo hubiyo in khadadka keenista gaaska iyo dhuumaha gaaska keena ayan si shil ah u qalloocin ama u dhici doonin wareegga santuuqa.
4. Qalab Tire
Qalabka saxanka waxaa laga sameeyaa astaamaha aluminium ee xoogga sare leh oo leh awood qaadasho wanaagsan. Labada dhinacba waxaa ku yaal biraha birta ah ee birta ka sameysan oo lagu rakibo qalab kale. Dhererka saxaaradda waa la hagaajin karaa hadba sida loogu baahdo. Saxanku wuxuu leeyahay geesaha wareegsan ee is-difaac ah.
Saqafka Sare ee Dhexdhexaadiyaha Caafimaadka
5. Goobaha Gaaska
Midabka iyo qaabka isku xidhka gaaska ayaa ka duwan si looga hortago isku xirnaan aan sax ahayn. Daabacaadda dugsiga sare, saddex gobol (oo furan, xidhan oo aan xidhnayn), waxay adeegsadeen in ka badan 20,000 jeer.
Isbitaalka Shiinaha ee Pendant
Gacan gacan wax ku ool ah:
Wareejinta gacanta: 0-350 °
Wareegista santuuqa: 0-350 °
Double Arm korontada Endoscopic pendant
Kaalinta Kaarboon Dioxide Gaaska
Dambiisha Birta ahaanta leh
Hore: QF-JX-300 Shiinaha ICU Caafimaadka Kala-bixinta Buundada Isbitaalka
Xiga: TS-D-100 Gaaska Labaad ee Korantada Gaaska Caafimaadka ee Qolka Howlgalka
TD-Q-100 Single Arm Electric Qalliinka Endoscopi ...
TS-D-100 Wareegtada Gaaska Gaaska Caafimaadka ee Korontada ...
TD-D-100 Single Electric Qalliinka Gas surka w ...